Rita, Writing for My Sake!: Top 10 in my mind !
Posted by Rita at 10/25/2009 10:35:00 AM
သဘောတကျ ဖတ်သွားတယ် ညီမ။
God Father သားအဖတော့ သဘောကျတာချင်း တူပါ့။ ကျန်တာတော့ တူဘူးရယ်.. :)
25 Oct 09, 14:16
littlebrook: ဂေါ့ဒ်ဖားသားထဲက အယ်လ်ပါချီနိုကို ကြိုက်သွားတယ် အေဂျေခရိုနင်လည်း ကြိုက်ပါ့ အမရေ ..
who is no: 1?...didnt explain about no: 1... :)
Click & Select the area beside No.1 .. you'll see the magic.
ချစ်ညီမလေး ရီတာက မောင့်ကို ဖွက်ထားတာကိုးးးးးးးးး
နှစ်သက်မိသော အမျိုးသားတွေ အကြောင်းကို မှတ်ချက်တွေနဲ့တကွရေးထားတာ.. စိတ်ဝင်စားစရာ...
ဖွက်ထားတဲ့သူ အကြောင်းကိုလဲ မှတ်ချက်လေးနဲ့တကွ ဆိုရင် ပိုမိုက်သွားမှာ... ဟဲဟဲ...
အံမလေးတော် ကျုပ်ကပဲ တောင်းတောင်းပန်ပန် တက်ခိုင်းရတယ် ဖြစ်ရသေး
Thanks for this. I enjoyed reading your writing as always.
Hmmm...let's see, I can agree with you on 2,7and 9. I intentionally left 1 out as I can get into trouble if I also agree with you on that. (j/k)
ဆရာမနဲ့ကား ဆိုတာက ကျောင်းဆရာမကို ကြိုက်တဲ့ကားမဟုတ်လား စာမေးပွဲအဆင်ပြေအောင်
နောက်တော့ သူငှေးသမီးကို ရအောင်ယူဖို့ကြိုးစား
လူသူအမြင်မှာ လူချမ်းသာကြားတိုးဖို့ သူငှေးယောင်ဆောင် နာလိုက်တဲ့ဇာတ် =)
သူနဲ့ တွေ့ဖို့ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပုံတွေ ခုပြန်မြင်ယောင်တယ်
ပြောတဲ့ကားချင်းတူ မတူတော့ မသိဘူး ထင်တာတွေ စွတ်ပြောမိဘီ ^_^
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုဘဲသဘောကျတယ် အဲဒီ အကောင်တွေ ကိုတခါမှသဘောမကျဘူး။ ချွင်းချက်ကတော့ movie character အနေနဲ့ Don Vito Corleone နဲ့ Michael Corleone ပါ။ Bill Gates အကြောင်း စာအုပ် ၃ အုပ်လောက်ဖတ်လိုက်ရပြီး သူ့ကိုအထင်ကို ကြီးလို့မရတော့ဘူး။ သူက opportunist သက်သက်ပဲ။ computer မှာတတ်တာထက် marketing မှာပိုတော်တာတွေ့ရတယ်။ Bill gates သာ ဒီ လောကကို လုပ်ခွင့်မရခဲ့ရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ Operation system ကိုတယောက်က ထုတ်နိုင်မှာပါပဲ။ အခုလဲ ကြည့် လေ။ တကယ် ဒီလောကကိုစိတ်ပါတာမှမဟုတ်ပဲ။ အနားယူပြီး charity လုပ်နေသတဲ့။
ရီတာ မဖော်ပြတဲ့ နံပတ် တစ် ဘယ်သူလဲဆိုတာသိနေသလိုပဲ။ ဟဲဟဲ။
most r same.
But i don't like Zaw win htut and BYJ.
BYJ for too beauty( i don't use handsome) like lady.
ကိုယ် နောက်ဆုတ်သွားတာ မဟုတ်ဘူးနော်။
i also like that word.
ဟယ် အားလုံးနီးပါး အသက် ၄၀ ကျော်ကြီးပဲ။
Leonardo D, Matt Demon, Jake Gyllenhaal, Shia LaBeouf
their movies are also good..
သူတို့လဲ ဘယ်လောက်မှ ပိုမငယ်ပါဘူးလေ။
ပြီးတော့ ငယ်တာတွေ သိပ်ကြိုက်လို့ မဖြစ်ဘူး။
ဒီလူတွေကို တမင် ရွေးထားရတာ။
ဒါမှ သူ့ပြိုင်ဘက်တွေ အားလုံးနီးပါး အသက်ကြီးကြီးတွေချည်းပဲ ဆိုပြီး စိတ်ချနေအောင်လို့။
ရိပ်မိတယ်။ No.1 လဲ လေးဆယ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ။ :P j/k